Tudor wuxuu kacay, astaantii England | Safarka Absolut
La Tudor Rose (mararka qaarkood loo yaqaan Union rose ama si fudud Ingiriis Rose) waa astaanta qaran ee wacdinta England tan iyo dabayaaqadii qarniyadii dhexe. Ubaxan wuxuu magaciisu ka qaadanayaa Tudor house, boqortooyadii midaysay guryaha sharafta leh ee Lancaster iyo York.
In gaashaammada dhaqanka ee England, kor u kacaani wuxuu umuuqdaa mid matalaya shan petals cad (oo matalaya Aqalka York) iyo shan kale oo casaan ah (kan Lancaster). Si kastaba ha noqotee, adduunka ubaxa, ubax Tudor waa casaan, midab midabkeedu yahay natiijada isku dhafka casaanka cas iyo tan cad.
1 Sooyaal taariikheed
2 Tudor kacay: astaanta England
3 Ubax aad uga fog Ingiriiska
Tudor-ka kor u kaca wuxuu leeyahay lacag calaamadeyn xoog leh maadaama uu matalayo dhamaadka wicitaanka Dagaalkii Roses, iska hor imaadkii hubeysnaa ee ka horyimid labadii qoys ee ugu xooga weynaa ingiriisiga qarnigii XNUMXaad.
Dagaalku wuxuu ku dhammaaday Henry oo ka tirsan Lancaster guushiisii Dagaalkii Goobta Bosworth (1485). Guulwade wuxuu isu naadiyey inuu boqor noqdo magaca Henry VII, inkasta oo sanad kadib uu guursaday xaaskiisa Elizabeth of York, sidaasna ay ku midoobeen labada qoysba ugana dhabeeyeen dib u heshiisiinta. Si loo muujiyo midnimadan cusub ee hal astaan ​​ah, labada midab ayaa kacay (markii dambe pink pink) ayaa la qaatay, taas oo laga bilaabo xilligaas wixii ka dambeeya loo aqoonsan doono Tudor rose ama midowgii kacay.
Marka laga tago halyeeyga, xaqiiqda taariikhiga ah waxay cadeyneysaa in inta lagu gudajiray Dagaalkii Sokeeye ee Ingriiska ee dhiiga lahaa kaliya astaanta ubax cad ay jirtay, oo ay adeegsadeen Aqalka York. Sida muuqata, casaanka cas ayaa la qaatay ka dib dhammaadka khilaafka ujeeddadiisuna tahay abuuritaanka astaanta cusub. Meel dacaayad u ah waqtiga si loo adkeeyo midnimada qaran ee cusub loona shaabadeeyo nabarradii hore.
Tudor Rose, natiijada midowga u dhexeeya astaamaha Guriga Lancaster (casaanka cas) iyo Aqalka York (kacsan cad).
Tan iyo markaas, taariikhda Ingriiska oo dhan Tudor ayaa u taagnaa siyaabo kala duwan. Mararka qaarkood sida a laba kaclaan, kuwa kale oo leh mid ka mid ah ubax ku dulsaaray kale ah iyo, badanaa, sida hal la shiiday ayaa kacay. Matalaadda ubaxeedka dusha laga saaray taaj sidoo kale waa mid aad u caan ah, iyada oo astaan ​​u ah boqortooyada Ingiriiska oo midaysan.
Tudor kacay: astaanta England
Maanta, Tudor-ka ayaa loo arkaa inuu yahay astaanta rasmiga ah ee Ingiriiska, in kasta oo aanu ahayn Boqortooyada Ingiriiska. Xaqiiq ahaan, mid kasta oo ka mid ah afarta ummadood ee ka kooban dalku wuxuu adeegsadaa astaan ​​u gaar ah: Scotland wuxuu leeyahay yamaarug, Wales leekka e Waqooyiga Ireland shamrock, oo sidoo kale ah astaanta Jamhuuriyadda Ireland.
Tudor ubax waxaa laga helaa astaanta rasmiga ah ee Mas'uuliyiinta Tower of London iyo ilaalada boqoradda. Waxay sidoo kale u muuqatay sannado badan dhinaca dambe ee 20 qadaadiic ah. Dabcan, isaguna waa kuraasta jaakada hubka ee Boqortooyada Ingiriiska iyo kuwa Maxkamadda Sare ka yimid wadankan.
Tan waxaa dheer, taageerayaasha rugby waxay si fiican u ogyihiin in midowgii kacay uu ku yaalo maaliyadaha ciyaartoyda xulka qaranka England.
Ciyaartoyda kooxda rugby-ga ee Ingriiska, oo leh laabta xabadka
Magaalooyin iyo magaalooyin badan oo Ingiriis ah ayaa si sharaf leh u xirta Ingiriis Rose calaamadaha deegaankaaga. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah Sutton Coldfield, oo u dhow Birmingham, oo uu Henry VIII laftiisu siiyay xaaladda Ciudad Real. Tudor wuxuu sidoo kale u muuqday jaakada hubka ee magaalada jaamacadda Oxford.
Sidoo kale, waa in la ogaadaa in ubax loo adeegsaday dhammaan dukumiintiyada iyo goobaha Xafiiska dalxiiska ee England (BooqoEngland), inkasta oo leh naqshad hal-abuurnimo ah.
Ubax aad uga fog Ingiriiska
Laakiin sidoo kale midowgii caanka ahaa ayaa ka kacay meelo kale oo ka fog Ingiriiska. Tusaale ahaan, degmada iyo degmada ee Boqorada Magaalada New York, waxay xirtaa Tudor oo ka dulbatay calankeeda iyo shaabad rasmi ah. Sidoo kale calamada Annapolis oo ku taal Maryland, wuxuu ka kooban yahay Tudor wuxuu ku soo kor kacay yamaarugga Scottish-ka, oo labaduba kor loo qaaday taaj.
Adigoon ka bixin Mareykanka, waxaa jira mid kale xiisaha taariikheed iyo juqraafi ee gobolka South Carolina. Halkaas waxaan ka heli karnaa magaalo la yiraahdo York, oo loo yaqaan «magaalada ubax cad». Kaliya 50 kiiloomitir, oo u socota koonfur-bari oo aan ka bixin gobolka, waxaa jira magaalo kale oo sita magaca Lancaster. Naanaysta magaaladani waa, dabcan, "magaalada casaanka cas."
Ugu dambeyntii, waxaan sidoo kale ka heli karnaa Tudor inuu ka kacay gudaha jaakada hubka ee Kanada, oo ah qayb ka mid ah xilliyadii gumeystihii Ingiriiska oo adkeystay waqti ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Tudor wuxuu kacay, ubaxa qaranka England
Aurora Borealis ee Danmark